Bixinta Xashiishadda Caafimaadka Ee Ireland Waxay Noqotay Mid Sii Socda. Bukaanku uma baahna mar dambe inay u safraan Nederland. • Dawooyinka Inc.eu
Bixinta xashiishadda dawada ee Ireland waxay noqon doontaa mid joogto ah. Bukaanku uma baahna inay aadaan Netherlands.
Markii Coronavirus uu bilaabay inuu si dhab ah u saameeyo nolosha caadiga ah horaantii sanadkan, dad badan oo adduunka ah waxay bilaabeen inay dareemaan saameynta xun ee xirnaanshaha, ka fogaanshaha bulshada iyo xannibaadaha safarka. Si kastaba ha noqotee, bukaannada u baahan xashiishka caafimaad ee Irland, waxaa jiray faa'iido yar: adeegga gaarsiinta ku-meelgaarka ah si looga fogaado inay dibedda ugu safraan daawadooda.
Kahor soo bandhigida adeegan gaarsiinta, bukaanleyda waxay ku qasbanaadeen inay u safraan Nederland si ay u buuxiyaan dawooyinkooda. In kasta oo Nederland leedahay mid ka mid ah qaybaha ugu xasaasisan xashiishadda caafimaadka adduunka, haddana dalku wuxuu mamnuucayaa dhoofinta ganacsiga ee badeecooyinka xashiishka.
Si kastaba ha noqotee, bukaanjiifka ka socda Wadamada kale ee xubnaha ka ah Midowga Yurub waxay awoodaan inay ku buuxiyaan dawooyinka ay ku qoraan gudaha wadanka. Taasi waa illaa iyo markii cudurka faafa ee Coronavirus uu soo saaray baahida loo qabo xannibaadaha safarka ee daran, mid caalami ah iyo mid gudaha ah.
Ka dib markii lagu dhawaaqay xayiraadaha Coronavirus, dowladda Irish waxay dejisay waddo ku meel gaar ah oo loogu oggolaanayo bukaannada xashiishka caafimaad inay helaan daawooyinkooda inta lagu jiro xiritaanka. Si kastaba ha noqotee, guusha iyo jawaab celinta wanaagsan ee bukaanka awgeed, Wasiirka Caafimaadka ee Iirland Stephen Donnelly wuxuu ku dhawaaqay in qorshuhu uu hadda ahaan doono mid joogto ah!
Si guul leh u gaarsiinta xashiishadda daawada ee Ireland
War-saxaafadeed, Xoghayaha Caafimaadka Stephen Donnelly oo hadalkiisa sii wata, “Bukaanno badan iyo qoysaskooda waxay ila wadaageen sheekooyin aniga iyo saraakiisha waaxeyda ku saabsan sida qorshahan uu si weyn ugu horumariyay noloshooda.
Gaarsiinta xashiishka daawada ee Irelandafb)
"Waxay ka hadleen culeyska safarka joogtada ah iyo dhibaatooyinka caafimaad ee la xiriira, iyo walaaca ay ka qabaan inay daroogada ka dhammaadaan."
Si aad u qorto rijeetada loogu talagalay xashiishadda daawada Ireland Si tan loo helo, bukaanku waa inay u soo gudbiyaan codsi Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyagoo ka oggolaanaya la taliye takhasus leh. Si kastaba ha noqotee, Wasiirka Caafimaadku doorka dhabta ah kuma ciyaaro geedi socodka go'aan qaadashada.
Hadda ka dib looma baahna in bukaanku u dhoofaan debedda, si ay u soo qaataan waxyaabaha xashiishadda loo qoro. Taabadalkeed, waxay diirada saari karaan caafimaadkooda iyo caafimaadkooda. “
Wasaaradda Caafimaadka ayaa hadda bilaabaysa qorshayaal ay ku hirgelinayso adeegga dhalmada oo ah tallaabo joogto ah iyada oo ujeedadu tahay fududeynta helitaanka xashiishadda caafimaadka ee Ireland.
Ilo ay ka mid yihiin Canex (EN), Gov.ie (EN), IrishTimes (EN)
EuropaIrelanddaawo cannabisdaawada cawskaNederland
Xogta waxay muujineysaa koror boqolkiiba 42,7 wadarta tirada qulqulka ...
Goobta dib-u-eegista Cannabis Weedmaps waxay ku soo bandhigaysaa dadweynaha qiimeyn dhan $ 1,5 bilyan
Shirkadda waalidka ee Weedmaps ayaa dadweynaha u soo bandhigi doonta qiimeyn dhan $ 1,5 bilyan, ...